November, 2019 | Nhetembo - Detembai Titandare
Zvavati uchasvika kupera kwesvondo, Chirega kuuya angori maoko, Kana wakabata kanyama kepondo? Zvinoremererawoka zvitakurwa, Hwemubhodoro hutsvuku, hauoni! Ndokuitawozve munhu azvipira, Ukama igasva hunotoda…
Vadzidzisi vanobatsira muupenyu, Rangarira raramo yavo iri pauri, Ndosaka vachivavarira paunozvarwa, Kuti ubude uri zidofo remakoko. Chiremba anokurapa nguva dzese, Paunorwara mudumbu nemusoro,…
Kwamuka basa, ko-o huyaika! Torova huvi kuno kudunhu riri kure, svikai! Senhiyo pamhara gondo, vose voti mwanda, Gundamusevere, ndiani angade kusaririra pakadai? Vamwe…
Posted On 11 Nov 30 Dec
Chamutambarare (Haiye) Chamutambarare (Haiye) Maringo-ringo ndiani (NdiaMujijiri) Banga ndazoriwana muchakunda Gonzo rine ndoro pamusana Chiya chidembo pamuchinjiri Chinyura iwe Nyamutsvinya mutsvinyura
Ndakomberedzwa nemiteyo, Kune yechisikirwa handisvikiyo, Ndinoitwa huku, mutsipa kwiyo, Ndinovhunika ndapurwa sezviyo, Rwavagara vachiimba rwiyo. Ndiri murufuse, ndawakunga, Vachindibanha nekunditunga, Kundibata vanotondisunga, Bakatwa…
Kurova kwehana here, kuti tsemu? Hameno zvinoita hura kukakatana, Kune mumwe chete wavakarotswa, Kutanga kumuonera kutsi kwehope, Kuzoti ba-a, kubva wodonha tsiriri, Nyeredzi…
Ndinokuda zvangu ufunge! Zvinotonetsa kutsanangura, Manzwira ewangu mwoyo, Kutaura ndoita kuzevezera, Zvoita idonhe misodzinyina. Dairawozve ndichikushevedza! Kusuka wopedzisa mbaimbai, Ndibate, ita zvekundimbundira, Undipomhodze…
Sadza nederere Chava chitai-tai Kuzoti nekanyama Mhanza powo-o!